Dowladda Federaalka Soomaaliya oo cadeysay mowqifkeeda Imaaraarka carabta[Akhriso] | SAHAN ONLINE
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo cadeysay mowqifkeeda Imaaraarka carabta[Akhriso]
MUQDISHO – Dowladda Federaaliga ah ee Soomaaliya gaar ahaana Wasaaradda Arrimaha dibadda ayaa warsaxaafadeed ku taariikheysan 16 April.2018 soo saartay kaasoo ay ku sheegtay in xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraatka carabta uu yahay mid soo jireen ah isla markaana Shucuubta labada dal uu ka dhaxeeyo ganacsi,dhaqan iyo dhaqaale.
Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dalka Soomaaliya ay ka socdaan Isbadelo dhaqaale iyo amni taasoo ay muhiim tahay in dowladda Imaaraatku ka qeybqaadato sidii loo gaari lahaa himilooyinkaas.
…”Iyadoo lama taabtaan tahay midnimada Soomaaliya haddana Dowladda Federaalka waxay soo dhaweynaysaa taageerada Isutaga Imaaraatka carabtu siiyo dhinaca suggiga amniga iyo la dagaalanka kooxaha Xagjirka ah..” ayaa lagu yiri Warsaxaafadeedka.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay dhanka kale ku sheegtay qoraalka in ay soo dhaweynayso maalgelin kasta iyadoo loo marayo shuruucda dalka u degsan.
Dhanka kale dowladda oo ka hadashay lacag dhawaan dalka Isutaga Imaaraatka carabta lagaga qabtay garoonka Aadan Cadde ayey garowshiyo la bixisay in lacagtaas u socotay ciidamada,waxayna dowladu u muuqata mid sii-deyn doonta lacagtaas oo taala Bangiga dhexe.
Dowladda ayaa hadalkeedu imaanayaa xili Wakaaladda wararka ee dalka Isutaga Imaaraatka carabta (WAM) ayaa warsaxaafadeed kusoo baxay lagu sheegay iney dowladda Imaaraatku joojisay gebi ahaanba Tababarkii ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya kaasoo soo bilowday 2014,taasoo ujeedadiisuna ahayd sidii loo tayayn lahaa ciidamada Soomaaliyeed.